मनमुटाव सकिएकै हो त पुजा र आकाशको ? – Mero Film
मनमुटाव सकिएकै हो त पुजा र आकाशको ?
केहि साता देखि मनमुटाव भएका अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठबीच पुन मेलमिलाप भएको छ । प्रेम सम्बन्धमा रहेका पुजा र आकाशबीच फेरि नजिकिएका छन् ।
कहिले बोचचाल नै बन्द हुने त कहिले अत्यधिक मिल्ने गरेका यि जोडीलाई दर्शकले असाध्यै मन पराका जोडी हुन् । दर्शकका अगाडी प्रेमका कुराहरु पनि खुल्लस्त पार्दै आएका उनीहरुबीच यसपटकको ठाकठुक भने ठूलै कारणले भएको थियो ।
यो ठाकठुक पर्नुको कारण हो । नजिकको साथी अर्थात प्रेमी आकाश श्रेष्ठ रजतपट कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीसँग मिलेर मेलम्चीमा राहत बाँड्न जानुरहेको छ ।
किनभने गत वर्षको लकडाउनमा टेलिभिजन कार्यक्रम ‘रजतपट’ का सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले पूजालाई लक्षित गरेर एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसका कारण पूजा लामो समय मानसिक तनावमा रहेकी थिइन् । त्यहि मान्छेसँग आफुले मन पराएको मान्छे राहत बाँड्न गएपछि उनले आफू अपमानित भएको महशुस गरेकी थिइन् । यसैबीच उनीहरुबीचको सम्बन्ध चुडिएको थियो । पुजा शर्माले ऋषि धमलाको कार्यक्रममा मन दुखेको कुरा गरेकी थिइन ।
केहि साता अघि ऋषिसँगको अन्तरवार्ताकाक्रम उनले मन दुखेको अभिव्यक्ती दिएकी थिइन् । आफु आकाशसँगको प्रेममा नरहेको समेत बताएकी थिइन् । तीन साता नै बोलचाल बन्द भएका आकाश र पुजाको जोडीलाई संगीतकार अर्जुन पोखरेलले मिलन गराएको खबर बाहिरिएको छ । आज संगीतकार अर्जुन पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पूजा र आकाशसँगको तस्विर राखेका छन् । उनले चाँडै नै नयाँ काम गर्न लागेको बताएका छन् । यसैबाट उनीहरुको मिलाप भएको बुझ्न सकिन्छ ।
२०७८ असार २४ गते १६:४६ मा प्रकाशित
पल–समिक्षाको सम्बन्ध : के सबै समाचारहरु भ्रामक हुन् ?
पल शाह भन्छन् – समीक्षा र मेरो सम्बन्ध सहकर्मीको मात्र हो !
गायिका समीक्षाको स्पष्टिकरण : हामीबीच अनैतिक सम्बन्ध छैन
फिल्म ‘चुरीफुरी’ सेन्सर पास, रिलिज कहिले ?
फिल्म ‘घामड शेरे’ युटुवमा
हार्डी भन्छन्- मैले रणवीरसँग काम गर्दा जति रमाइलो गरेको छु !
डीएआरले किन्यो ‘प्रकाश’को डिजिटल अधिकार